प्रचण्डको छटपटीः दुई त्रास र तीन पात्र « Pahilo News
प्रचण्डको छटपटीः दुई त्रास र तीन पात्र
प्रकाशित मिति : 8 July, 2016 4:03 am
२४ असार । आफैँ प्रस्ताव गरेर बनाएको सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम नै ल्याउन नदिएर हटाइहाल्न नेकपा (माओवादी केन्द्र) किन अर्धैर्य भयो होला ? अनि अहिले बजेट पारित हुने बेलामा फेरि सरकार हटाउने कुरामा उसको ध्यान किन गयो होला ? यसका पछाडि दुई त्रास र तीन पात्रले भूमिका खेलेका छन् ।
बजेटअघि एमालेसँग नौबुँदे सहमति गरेर तत्काल सत्ता परिवर्तनको बेमौसमी खेलमा नलाग्ने निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रले बजेट पारित नहुँदै फेरि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने आशय प्रकट गर्न थालेको छ । यस्तो निर्णय गर्नपर्ने अवस्थामा पुग्नुका पछाडि मूलतः दुईवटा कारण र तीन पात्रले काम गरेको स्रोतको दाबी छ ।
पहिलो, अख्तियारको डर । माओवादीका पूर्वलडाकुलाई राज्यले दिएको रकम केही नेताले दुरुपयोग गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी छ । यो काण्डमा सबैभन्दा बढी विवादित नेता हुन्, कृष्णबहादुर महरा । प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि चिनियाँ व्यापारीसँग पैसा मागेको टेप प्रकरणपछि चीन पक्षधर भनेर सार्वजनिक रुपमै चिनिने महरा अहिले भारतको खास गोटीका रुपमा सक्रिय हुनुका पछाडि यही डरले काम गरेको बताइन्छ । यही डरमा भारतले खेलेको र महरालार्र्ई उचालेर सरकार गिराउने डिजाइन अघि बढाएको विश्लेषण भइरहेको छ ।
दोस्रो, निर्वाचन । यो कारणमा भने कांग्रेस र माओवादीको स्वार्थ मिलेको छ । सरकारले आगामी वर्षभित्रै तीनवटै निर्वाचन गर्ने गरी तयारी अघि बढाएको छ । सम्भाव्यताबारे निर्वाचन आयोगसँग आवश्यक सल्लाह गर्नेदेखि आवश्यक कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ । लोकतन्त्रमा निर्वाचनको खुलेर विरोध गर्नु आफ्नै लागि घातक हुन्छ । त्यही भएर माओवादी र कांग्रेसले खुलेरै चुनावको विरोध गर्न सकेका छैनन् । तर, यो अवस्थामा चुनाव भयो भने एमालेलाई पहिलो पार्टी बन्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन भन्नेमा कांग्रेस र माओवादी एकमत छन् । कांग्रेस दोस्रो हुन्छ भन्नेमा पनि एकमत नै छ । तर, माओवादीलाई तेस्रो स्थानका लागि आफ्नो प्रतिस्पर्धा तेस्रोका लागि मधेसवादी वा राप्रपा नेपालमध्ये कोसँग हुन्छ भन्नेमा शंका छ । २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा तेस्रो हैसियतमा खुम्चिनका पछाडि चुनाव बहिष्कार गरेका मोहन वैद्यहरूको भूमिकाले काम गरेको भन्ने माओवादी ठम्याइ छ । हिजो वैद्यको एउटै पार्टी खतराका रुपमा थियो भने अहिले त्यससँगै विप्लव र बाबुराम भट्टाईका पार्टी पनि थपिएका छन् । विप्लवहरू चुनावमै जाँदैनन्, बाबुराम गए पनि जित्दैनन्, तर हराउन ठूलो भूमिका रहन्छट भन्ने बुझाइ माओवादीको छ ।
यो खेलमा शक्ति केन्द्रका गुप्तचर एजेन्सीले माओवादीका तीन नेतालाई प्रयोग गरेको स्रोतको दाबी छ ।
एमालेसँगको समीकरण भत्काउने खेलमा लागेका मुख्य पात्र त कृष्णबहादुर महरा भइहाले । बैशाखको दोस्रो साता महरा श्रीमतीको उपचार गर्ने निहुँमा दिल्ली गएपछि यो खेलले ठोस रुप लिएको थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दिल्लीमै भएको बेला तत्कालीन राजदूत दीपकुमार उपाध्यायको संयोजनमा दुईजनाबीच सत्तासमीकरणका बारेमा विस्तृत कुराकानी भएको थियो ।
महराबाहेक वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माको पछिल्लो समयमा एजेन्सीका मान्छेहरुसँग बाक्लो उठबस भएको रिपोर्ट बालुवाटार पुगेको छ । यी दुबैजनाको असन्तुष्टी शक्तिबहादुर बस्नेतलाई गृहमन्त्री बनाएबाट एक ठाउँमा आइपुगेको हो । जनार्दन आफैँ गृहमन्त्री बन्न चाहन्थे भने वर्षमान पनि शक्ति बस्नेतलाई बनाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा थिए ।
स्रोतका अनुसार, अहिले यिर्न तीनजना बसेर सत्ता परिवर्तन रणनीति बनाइरहेका छन् । कांग्रेसका दोस्रो तहका नेताहरुसँग कुराकानी गर्ने, शक्ति केन्द्रहरुसँगको सम्पर्कमा बस्ने र नयाँ समीकरणका पक्षमा अध्यक्ष दाहाललाई उकास्ने काममा यिनीहरुले नै भूमिका खेलिरहेका छन् ।
शक्ति केन्द्रले भने माओवादीको डरलाई उपयोग गरेर नेपालको राजनीतिमा दोहोरो खेल खेलिरहेको बताइन्छ । पहिलो, यो सरकार ढाल्न माओवादीलाई उचाल्ने र माओवादीलाई समर्थन फिर्ता लिने निर्णयमा पु¥याइदिने तर त्यसपछि अर्को सरकार बन्न नदिने । पछिल्लो समयमा नेपालमा बढ्दै गएको भारतविरोधी भावनाका कारण पनि भारत आफू देखिने गरी सत्ता परिवर्तनको खेलमा नआउने तर भित्रभित्रै माओवादी उकासेर ओलीलाई दिइएको समर्थन झिकिदिने र शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बहुमतीय सरकार बनाउने रणनीतिमा रहेको स्रोतको बुझाइ छ । स्रोतले भन्यो, ‘हेर्नुहोला, पुष्पकमल दाहाललाई कुनै हालतमा समर्थन हुँदैन ।’